Janata Ko Aawaj - आवाज बिहिनहरुको आवाज जनताको आवाज
सभापतिमा आठजना आकांक्षी
सलिमका पिताको निधन
काठमाडौं। निर्देशक तथा मोडल विरेन्द्र नौभाग्य र मौसमी गुरुङ्गको फिचरिङ्गमा ‘मायाको कम्पनी ’गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक गीतमा माय...
डा. चिन्तामणी योगीको प्रवचनबाट प्राप्ति गरिएका केही सन्देश: चन्द्र कान्त पण्डित. काठमाडौको चाबहिल स्थित पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालयमा केही नयॉ कुरा...
यस वसन्तको दिनमा सुन्दरता आँखालाई ताजा बनाउँछ, रङहरू घुम्छ। फूलहरू हरियो रंगका घरहरू। तिनीहरू हुर्किन्छन् र आफ्नो चमक राख्छन्। हाम्रो आँखालाई छोप्ने र...
काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर ७ र ११ लाई जोड्न ह्युमपाइप राखेर बनाइएको अस्थायी पुलमा क्षति पुर्याए...
काठमाण्डौं । नित्याशिवा र पुरुषोत्तम न्यौपाने को आवाजमा रहेको ‘उपहार मायाको’ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । शंकर अधिकारी घायलको गीत र निर्देशनमा शंकर...
काठमाडौं । गायक सुन्दर परियार र गायिका कमला पोखरेलको आवाजमा रहेको ‘साइली’ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । विवाहको सिजन लागेसंगै बिहेका लगनहरु पनि जुर्...
एउटै आकाशमुनि जन्मियो हो। यो पृथ्वीको माटोले बनेको हो जन्मदेखि नै ढालिएको जीवन र परिस्थिति...
काठमाडौं महानगरपालिका वडा ५ को अध्यक्षका लागि नेपाली काङ्ग्रेसबाट पुनः उम्मेदवारी दिएका छ्...
यो दुनियाँ बडो अचम्मको छ सब कुरा पाएरपनी हास्नका लागि समय छैन दिन रात भागेको यो दुनियाँको लागि तर आफ्नो जिन्दगीको लागि समय छैन । आमाले माया गरेर खाना खेलाउनु भएको ती याद हरु त छन तर आमा लाई आमा भन्ने समय छैन बाबाले औंला समाएर डुलाएका ती याद हरु त छन् । तर बाबालाई...
हाल मलेसियामा रहेका दोलखाली युवा कलाकार पासाङ्ग शेर्पाको पछिल्लो प्रस्तुति “गाईको गोबर” सार्बजनिक भएको छ । उनले यस अघि पनि थुप्रै गीतहरु बजारमा ल्याएका छन बिशेष गरेर आफ्नै कला संस्कृति र मौलिकता शिरमा राखेर आफ्ना सांगीतिक यात्रा अगाडी बढाउने पासाङ्ग निकै मिज्यासिला स्वभावका छन् । गीतमा लय शब्द लोकप्रिय गायक तथा सर्जक उद्धब घिमिरेले भरेका...
हाल मलेसियामा रहेका दोलखाली युवा कलाकार पासाङ्ग शेर्पाको पछिल्लो प्रस्तुति “गाईको गोबर” सार्बजनिक भएको छ । उनले यस अघि पनि थुप्रै गीतहरु बजारमा ल्याएका छन बिशेष गरेर आफ्नै कला संस्कृति र मौलिकता शिरमा राखेर आफ्ना सांगीतिक यात्रा अगाडी बढाउने पासाङ्ग निकै मिज्यासिला स्वभावका छन् । गीतमा लय शब्द लोकप्रिय गायक...
काठमाडौं। निर्देशक तथा मोडल विरेन्द्र नौभाग्य र मौसमी गुरुङ्गको फिचरिङ्गमा ‘मायाको कम्पनी ’गीतको म्य...
काठमाण्डौं । नित्याशिवा र पुरुषोत्तम न्यौपाने को आवाजमा रहेको ‘उपहार मायाको’ गीतको भिडियो सार्वजनिक ...
काठमाडौं । गायक सुन्दर परियार र गायिका कमला पोखरेलको आवाजमा रहेको ‘साइली’ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएक...
काठमाण्डौं । पप गायक मुकेश उखेडाको नयाँ गीत ’सानी’ को भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । टेरेन्स साउद अफिसि...
ठाकुर गौचनको शब्द तथा स्वरमा ‘हे कालु’ सार्वजनिक
गायक राजु बिरही सापकोटा र अम्बिका बिस्वकर्माले ल्याएको गित बाध मायाले चर्चाको शिखरमा
सन्तनु रेग्मी कांग्रेस बृत्तको पुरानो र परिचित नाम हो । केटाकेटि देखि नै कांग्रेसि परिवारमा हुर्कीनु...
विदेशमा रहेर पनि नेपालीहरूले मुलुकको गरिमालाई उच्च राख्न केही न केही गतिविधि गरिरहेकै हुन्छ । साहित्...
अष्ट्रिया , नेपाली युरोपियन खेलकुद संघ (एनआइएससी) को आयोजनामा आगामी नोभेम्बर ७ तारिखमा खुल्ला भलिबल ...
काठमाडौँ – निरन्तर ओरालो लागिरहेको नेपालको शेयर बजार अब उकालो लाग्ने भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले सेयर लगानीकर्ताहरूलाई सजिलो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएपछि बजो बढ्जे भएको हो । ब्रोकरमार्फत् सेयर किन्नेहरूका लागि नेप्सेले मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेर थप सहज बनाएपछि बजार बढ्ने विश्लेषण गरिएको छ । संशो...
विराटनगर,१६ पुस : मन्त्रीले के गर्छन् ? भनेर तपाँईलाई कसैले प्रश्न गर्यो भने सहजै जवाफ आउछ । काम गर्दैनन झुटो बोल्छन । त...
विराटनगर,१८ मंशिर : मानवीय सेवाका क्षेत्रमा महत्वपुर्ण योगदान गर्दै आएको लायन्स क्लव अफ ३२५ ए वान डिष्ट्रिकको दोस्रो क्व...
विराटनगर,१२ मंशिर : मोरंग काग्रेसको भोलि हुने निर्वाचनमा देउवा पक्षका उमेदवार दिलिप गच्छदार भन्दा कोईराला पक्षका डिग बहा...